ရွှေအိမ်စည်ကတော့ Miss လောကမှာ နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ စကားအပြောအဆိုပွင့်လင်းပြီး ရိုးသားတတ်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ တော်တော်များများရှိကြပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေဟာ မိန်းကလေးတွေအကြားရေပန်းစားလှပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့အပြောတွေကို နှစ်သက်တာကြောင့် ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အိမ်စည်ရဲ့ အင်တာဗျူးအတိုအစလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက်သုံးစကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည်ဟာ အေးနေဝင်းနဲ့ Relationship တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုတည်ဆောက်ပြီးနောက်မှာလည်း သူမအနေနဲ့ သူမရဲ့ Relationship ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်ဆူညံသံတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ RS နောက်မှာတော့ ဘာကိုမှသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ သူမဟာ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုပဲ လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပရိသတ်တွေအတွက် ရွှေအိမ်စည်ဟာ ဒီညမှာတော့ သူမရဲ့ Relationship ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ အေးနေဝင်းနဲ့ အတူတည်ဆောက်ထားတဲ့ Relationship ကို ပြတ်ဆဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
“အားလုံးကို အိမ်စည်ပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်အိမ်စည် နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကျော်အထိ အတိုင်းအတာတစ်ခုကို သည်းခံပီးသွားပီ. ဒီနေ့ဒီချိန်အထိလဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုရပ်ပြီး ဒီနေရာအထိရောက်အောင် စိတ်ရောလူရောနှစ်အစွမ်းကုန် အိမ်စည်ကြိုးစားခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့ relationship တစ်ခုမှာ နားလည်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်. ညှိနှိုင်းလို့မရတော့တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ပြတ်သားတဲ့ decision ကိုချဖို့လိုအပ်တယ်. အခုချိန်ဟာအိမ်စည်အတွက်တကယ့်ကိုအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပါ ပြိုင်ပွဲအတွက်အများကြီးကြိုးစားပြင်ဆင်နေရတဲ့အပြင် အိမ်စည်အတွက်အခြားဖိအားတွေများနေတဲ့အတွက် တခြားစိတ်အနှောက်အရှက်ဖြစ်စေမဲ့ အရာတွေအတွက် အိမ်စည်အချိန်မရှိဘူး.အိမ်စည်နားလည်ပါတယ် လူတွေဆိုတာ အချိန်တန်ရင်ပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ် အဲ့တော့ လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပီးဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ. ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲရမယ့်အတူတူ အိမ်စည်တို့ Relationship ကို ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီ.” ဆိုတဲ့စာလေးကို သူမအကောင့်ကနေတင်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ We Love Cele